Milan oo sheegtay inay KAKA ka war dhowrayso ka hor fasaxa Diseembar – Gool FM
Milan oo sheegtay inay KAKA ka war dhowrayso ka hor fasaxa Diseembar
Raage December 19, 2017
(Milano) 19 Dis 2017 – Guddoonka AC Milan ee Marco Fassone ayaa xaqiijiyay in Ricky Kaka uu “go’aansan doono waxa uu sameeynayo” ka hor fasaxa Diseembar.
Kaka ayaa maalin dhowayd ku dhawaaqay inuu ciyaaraha gebi ahaanba ka fariistay, balse weli aanu go’aan ka gaarin dalabka loo soo jeediyay ee ah inuu la shaqeeyo kooxdiisii hore ee San Siro oo maareeye ahaan u doonaysa.
“Waxaan saacad wada hadal ah 15 maalmood kahor la qaatay KAKA iyo aabihii,” ayuu daboolka ka qaaday Fassone oo galabta hadlayay.
“Afkaaro ayaannu is waydaarsanney ku saabsan mustaqbalkiisa iyo kan Milan sida uu u arko. Wuxuu qaatay muddo bil ah si uu go’aan u gaaro.” ayuu raaciyay.
“Waxay ila tahay inaannu markale xiriiri doonno kahor ciidda Masiixiga, annagoon nasiib wacan uun isu rajeeynayne eegayna in riyooyinkii ay si jiri karaan, sii socon karaan, dhamadeen ama soo laaban karaan.” ayuu yiri Fassone.
GOOGOOSKA: Leicester City vs Manchester City 1-1 (3-4)
GOOGOOSKA: SSC Napoli vs Udinese 1-0 (Napoli oo wareegga 8-da usoo baxday)